warkii.com » Corona-Virus oo markale faraha ka baxay xili maanta la diiwaan galiyay kiisaskii ugu badnaa.
Corona-Virus oo markale faraha ka baxay xili maanta la diiwaan galiyay kiisaskii ugu badnaa.
Hey’ada caafimaadka aduunka ee WHO ayaa sheegtay in 24tii saac ugu dambeysay ay diiwaan galiyeen kiisaskii ugu badnaa mudo hal maalin la diiwaan galiyo tan iyo markii uu dilaacay Viruska Corona ayagoona sheegay in cudurka maanta kaliya laga helay 230,370 qof.
Dadka laga helay kiisaskaas ayaa waxay intooda badan kasoo jeedaan dalalka Mareykanka, Brazil, India iyo South Africa, xili tirada cudurkaan u dhimatay 24tii saac ugu dambeysa ay kor u dhaaftay 5,000 oo qof.
Mareykanka ayaa ugu badan kiisaska cusub ee maanta la helay ayadoona tirada kiisaska cusub ay kor u dhaafeen 62 kun halka Brazil oo kaalinta labaad ku jirto ayadana kor u dhaafeen 24 kun oo kiis.
Sidoo kale mareykanka ayaa hogaaminayo dalalka kiisaska ugu badan laga helay tan iyo cudurkaan markuu dilaacay waxaana ilaa iyo haatan la diiwaan galiyay tiro kor u dhaafeyso 3.2 Million oo kiis xili dhimashadana ay mareyso 134,750 qof.
Sidoo kale dalalka uu aadka ugu fidayo mudooyinkaan dambe waxaa kamid ah India, south Afric, Mexico iyo Japan, waxaana xusid mudan in qaarada Yurub iyo China oo uu cudurkaan ka dilaacay mudooyinkaan dambe kiisaskooda sii yaraanayeen ayagoona u muuqdo iney xakameeyeen.
Tan iyo markii uu Viruskaan safmarka ah China ka dilaacay horaantii sanadkaan waxaa la diiwaan galiyay in kabadan 13 Million oo kiis ayadoona ay u dhinteen tiro kor u dhaafeyso 565,000 oo qof